Vazivi Venyeredzi Vanotungamirirwa Kuna Jesu | Upenyu hwaJesu
VAZIVI VENYEREDZI VANOTEVERA NYEREDZI INOVASVITSA KUJERUSAREMA, YOZOVASVITSA KUNA JESU
Kune vamwe varume vekuMabvazuva vanodzidza nezvenyeredzi, vachiti izvi zvinoita kuti vakwanise kuona zvichaitika muupenyu hwevanhu. (Isaya 47:13) Vari kumusha kwavo, vanoona nyeredzi voitevera kwemazana emakiromita vakananga kuJerusarema, kwete kuBhetrehema.
Vasvika kuJerusarema, vazivi venyeredzi vanobvunza kuti: “Aripiko iye akaberekwa ari mambo wevaJudha? Nokuti takaona nyeredzi yake patakanga tiri kumabvazuva, uye tauya kuzomupfugamira.”—Mateu 2:1, 2.
Mambo Herodhi weJerusarema anonzwa nezvazvo, obva ashatirwa. Saka anodana vapristi vakuru nevamwe vakuru vechitendero chechiJudha ovabvunza kuti Kristu anofanira kuzvarirwa kupi. Vachishandisa zvavakaverenga muMagwaro vanomupindura kuti: “MuBhetrehema.” (Mateu 2:5; Mika 5:2) Angonzwa izvozvo, Herodhi anoita kuti vazivi venyeredzi vaunzwe kwaari pachivande, ovaudza kuti: “Endai munonyatsotsvaka mwana wacho muduku, uye kana mamuwana mudzoke, mundiudze, kuti neniwo ndiende ndinomupfugamira.” (Mateu 2:8) Asi chiripo ndechokuti Herodhi ari kuda kuti kana awana mwana wacho omuuraya!
Vazivi venyeredzi pavanongoenda, chimwe chinhu chinoshamisa chinoitika. Nyeredzi iya yavakaona vachiri kuMabvazuva inofamba iri pamberi pavo. Zviri pachena kuti iyi haisi nyeredziwo zvayo asi kuti yatoiswa pamberi pavo kuti ivatungamirire. Vazivi venyeredzi vanoitevera kusvika yamira pamusoro chaipo pemba yaJosefa naMariya pavava kugara nemwanakomana wavo.
Pavanopinda mumba, vazivi venyeredzi vanowana Mariya nemwana wake Jesu. Vanobva vamukotamira, uye vanomupa zvipo zvegoridhe, nezvinonhuwira, nemura. Pashure paizvozvo, pavanenge vava kuda kudzokera kuna Herodhi, vanoyambirwa naMwari kuhope kuti vasaenda naikoko. Saka vanodzokera kumusha kwavo neimwe nzira.
Unofunga kuti ndiani akaita kuti nyeredzi itungamirire vazivi ava? Yeuka kuti haina kuvatungamirira kuti vabva vananga kuBhetrehema kwaiva naJesu. Yakavaendesa nokuJerusarema kwavakasvikosangana naMambo Herodhi, uyo aida kuuraya Jesu. Angadai akatomuuraya dai pasina kuti Mwari akapindira akazonyevera vazivi venyeredzi kuti vasaudza Herodhi kwaiva naJesu. Zviri pachena kuti nyeredzi iyi yakashandiswa nemuvengi waMwari, Satani, uyo aida kuuraya Jesu.
Tinoziva sei kuti nyeredzi yakaonekwa nevazivi venyeredzi yakanga isiri nyeredziwo zvayo?
Vazivi venyeredzi vanowana Jesu achigara pai?
Chii chingaita kuti titi Satani ndiye akatungamirira vazivi venyeredzi?
Tinofanira kungoyeuka Jesu sekamwana kacheche here? Ndivanaani vaiva “varume vakachenjera” vakauya kuzoona Jesu? Jesu ari kuitei iye zvino?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Vazivi Venyeredzi Vanoshanyira Jesu